बुढाबुढीको झगडा : फेसबुकमा स्टाटस ! हेर्नुहोस बुढाबुढीको यस्तो हुन्छ झगडा | Samacharpati.com – A Complete News Portal From Pokhara Nepal
बुढाबुढीको झगडा : फेसबुकमा स्टाटस ! हेर्नुहोस बुढाबुढीको यस्तो हुन्छ झगडा
प्रकाशित मिति: 2074 आषाढ 25 आइतबार(July 9, 2017) 8:51 AM बजे Posted By: Samachar Pati
समाचारपाटी, पोखरा, २५ असार । पहिला पहिलाको भन्दा आजकाल बुडाबुढीको घर झगडा हुने शैली भिन्न देखिन्छ । पहिला घरमा हेपेको र सासु ससुराले दुख दिएको विषयमा झगडा हुने गर्दथ्यो तर अहिले भिटिमा ओने सिरियल र फेसबुकको विषयमा झगडा हुने गर्दछ ।
गितको भिडियो स्याडो क्रियशनमा निर्माण गरेको हो । गितमा शिशिर श्रेष्ठले निदैृशन, समिर थोकरले कोरीयोग्राफी, रेशम दर्लामीले छायांकन र प्रदीप दहालले सम्पादन गरेका हुन् । गितमा मिन खनालले मालति घलेको अभिनय देख्न सकिन्छ ।
आमाले छाडेर पोइला गएपछि छोराछोरीको यस्तो बिचल्ली,
कुनै नेपाली दिदि बहिनीलाई मलाइ जस्तो नपरोस,
विदेशीएकी चेली नाबालक छोरासंग छुट्टिनुको पिडा तिजको